WAA MAXAY NOOCYADA DIGAAGGA AY QAADAAN UKUNTA UGU WEYN: SHARAX, SAWIR - BEERAHA DIGAAGA
Noocyada digaagga ee ukunta ugu weyn
Digaagga waa nooca ugu badan ee digaagga. Badanaa waxay u soo jeestaan ​​beeraha gaarka ah si ay u helaan ukun. Sidaa daraadeed, cayayaanka iyo hareeraha digaagga jihada ukunta ee leh wax soo saarka ukumaha sare leh iyo qiyaasta ukunta wayn waa mid xiiso leh oo ka yimaada soo saarayaasha waaweyn iyo beeraha yaryar. Aynu ogaanno astaamaha iyo tilmaamayaasha wax soo saarka.
La soo bandhigay sanadihii la soo dhaafay ee laga keenay Talyaaniga, kaas oo hagaajiyay Maraykanka. Leggorny waxa ay ku kala duwan yihiin iyaga oo aan qabyo ahayn iyo fududaan wax ku ool ah, waxay u dulqaadanayaan qabow fiican. Waxaa jira noocyo farabadan oo noocaan ah, laakiin inta badan, lugtu waa caddaan. Waxay bilaabaan in ay si degdeg ah u degdegaan - laga bilaabo ilaa afar illaa shan bilood. Ukunta ukuntu waxay leeyihiin qolof cad oo xoog leh. Dareenta dhalinta ma aha mid si gaar ah loo horumariyo, iyo digaagga waxaa laga saaraa kuleylaha. Chicks waxay leeyihiin heer badbaado aad u wanaagsan 95%. Waxay si fiican u shaqeeyaan sanadka ugu horeeya, ka dibna waxsoosaarkooda hoos ayey u dhacaan. Iyo bilowga, bisha ugu horeysa, ukumahoodu ma aha mid aad u weyn, laakiin marka si tartiib tartiib ah u noqdaan kuwo sii weyn. Laba sano ka dib, lakabyada ayaa badanaa loo diraa si loo gowraco. Hilibkoodu waa mid adag oo ku habboon suxuunta oo leh biyo kulul (tusaale ahaan, aspic). Ragga waxay ku quudiyaan miisaan qiyaastii 2.5-3 kg. Badanaa 10-15 dheddig waxay ku dhalaan hal ilmo. Waxaad shimbirtaas ku haysan kartaa xaalado kala duwan, laakiin socodka ayaa ka faa'iideysan doona oo saameyn wanaagsan ku yeelan kara awooda wax soosaaraya. Xaaladaha dibadda, waxay sidoo kale ku quudiyaan daaq. Shimbirahan firfircooni waxay u baahan yihiin inay garaan baalashooda ama ay sameeyaan meel sare.
Astaamaha ugu muhiimsan ee digaagdaha cadcad lagu soo bandhigay jadwalka hoose.
Midabka qalinka White
Cufanaanta tufaaxa Ku dhaji jirka
Isku dar Xirmooyinka caleen guduudka ah ee dhinaceeda
Madaxa Celcelis ahaan
Torso Isu-geyn dhexdhexaad ah
Beak Jiir xoog leh
Miisaanka 2 kg
Wax soo saarka ukunta Ilaa 300 rodol
Miisaanka 1 ukun 68-70
Inta badan dhammaantood, dareenka beeralayda digaaga ayaa soo jiidanaya baahida yar ee quudinta, oo ay weheliso awoodda ay u leedahay in ay qaaddo ukun badan, awood u leh inay u dillaacdo digaagga. Tani waxay sidoo kale jeclaan lahayd in loo isticmaalo helitaanka Beelaha cusub iyo taranta noocyada kale.
Digaagga jilicsan ee lugaha ayaa ka qaybqaatay taranta noocyada kala duwan ee isha iyo walxaha, sida lugbar, borkivka, iz-brown.
Mid ka mid ah noocyada leggorn, oo leh tiro yar iyo wax soo saarka ukunta wanaagsan. Waxay leedahay magacyo kale - B-33, White mini. Waxay leedahay dhamaan sifooyinka qaansiirka: aan qabin, karti u leh inay u dulqaado qabow, dareen diidmo xumo, wax soo saarka ukumaha sare, iwm, laakiin uma baahna dhul ballaaran oo socod ah. Taabashadani waxay ku jirtaa xitaa quudinta yar, laakiin waxa ay dalbaneysaa tayada.
Waa muhiim! Quudinta digaagga waa in lagu dheellitiraa, haddii kale maalinta tobnaad ee nolosha ayaa laga yaabaa inay yeeshaan faraha, kuwaas oo dhawaan keenaya lugaha iyo dhaqdhaqaaqa. Tani waxay badanaa sabab u tahay borotiinka xad-dhaafka ah ee cuntada. Cuntada aan dheellitirneyn (haddii uu jiro borotiin badan ama aan ku filnayn) waxay horseedaysaa hoos u dhac ku yimaada awooda lagu qaado ukunta.
Ragga labadan ilmo oo miisaankoodu ka badanyahay 1.7 kg, waxay muujiyaan firfircoonida haweenka. Noocani waxay leedahay bacriminta ugu badan ee ukunta - 95-98%.
Astaamaha ugu muhiimsan ee gogol gabal gabalka dumarka ah
Isku dar Ku dhajinta dhinaca caleen, casaan
Torso Yaraan yar
Miisaanka ilaa 1.4 kg
Wax soo saarka ukunta 210-260 pcs
Miisaanka 1 ukun 57-62
Tallaabooyinkaas ka yimaada digaagga taranka ee Czech waa mid ku habboon kuwa bilowga ah, maaddaama ayan ahayn oo kaliya lakabyo fiican oo leh ukun weyn, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin heer sare ah oo lagu noolaado xaalado aan fiicnayn. Cudurkaan waxaa lagu soo koobay muuqaalka daaweynta suuxinta iyo wax soo saarka ukumaha sareeya, iska caabinta cudurada iyo aan qabyo ahayn. Shimbirahaasi waxaa sabab u ah cufnaanta dhiradooda ay u dulqaadan karaan qabow. Waxaa lagu hayn karaa xaalado kala duwan, laakiin ugu fiican oo dhan - oo lugeeya. Qaar ka mid ah wadamada yurub waxa ay ku koraan xaaladaha beeraha digaaga ee digaaga. Ma rabaan inay quudiyaan, waxay si firfircoon u helaan cuntadooda marka ay socdaan. Waa in maskaxda lagu hayaa in magaca digaagga "Dominant" ay ka mid yihiin in ka badan hal iskutallaab ah oo ka yimaada noocyada kala duwan. Waxay ka duwan yihiin midabka baaluqyada, dhoobada, qaabka cayayaanka iyo kuwa kale, sifooyinka inta badan dibadda. Midabka baalasha ayaa xitaa noqon kara buluug (iskutallaabta D-107). Ukunta ukuntu waa mid madow (D-100), waxayna leeyihiin dareenka wacyigalinta wanaagsan, iyo suxufiyaal maskaxeed (D-104) waxay qaadan karaan ilaa 320 ukumood sannadkii, shaqsiyaddooduna si dhakhso ah ayey u koraan culeyska, sida digaagga jilicsan ee ukunta. Cirbadaha iskutallaabtu waxay miisaankoodu yahay 2.7-3.2 kg. Ukunta qallayl ee iskutallaabyadani waa badiyaa caleemaha, laakiin waxaa jira jajabyo badan oo leh ukumo caddaan ah. Wax-soo-saarka sare ee digaagga ayaa soconaya ilaa saddex sano, ka dibna wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco sanad walba. Cabsigelintu waxay bilaabmaysaa 5 bilood.
Astaamaha ugu muhiimsan ee dumarka caanka ah
Midabka qalinka Kala duwan
Cufanaanta tufaaxa Celcelis ahaan
Isku dar Midabka cas ee qaababka kala duwan
Torso Large oo ballaaran leh wareegsan
Beak Kala duwan
Miisaanka 1.8-2.3 kg
Wax soo saarka ukunta 315 gogo '
Miisaanka 1 ukun 65
Markaad isticmaasho ukunta, ha iska tuurin qolofka ukunta: waxaa loo isticmaali karaa sidii quudin ama bacriminta beerta.
Digaag dillaacsan Brown ayaa ka hadlaya hilibka iyo ukunta. Waxay ku kori karaan beeraha digaaga iyo guryaha yaryar ee gaarka loo leeyahay. Digaagga si dhakhso ah ayey u kordhi karaan miisaan yar yar, taas oo ka dhigaysa nooca noocan ah soo jiidashada ujeedka ganacsiga.
Iskudhac waxaa loo adeegsaday isticmaalka Plymouth iyo Rhode Island. Wareegtada 'brown break' ayaa lagu diiwaan geliyay 1970-yadii Jarmalka waxayna magaceeda ku bixisay magaca shirkadda 'Lohmann Tierzuht', taas oo keentay. Shimbirahaasi waxay ku baahsan yihiin guud ahaan qaaradda, sababtoo ah waxsoosaarkooda. Miisaanka ragga waa wax yar oo ka badan kan digaagga - qiyaastii 3 kg. Digaagga waxay qabaan dabeecad degan oo si wanaagsan ula soco noocyada kale.
Loman Brown waxay leedahay miisaan degdeg ah. 5-6 bilood jir, digaagga ayaa gaaraya qaangaadhin galmo waxayna qaadi kartaa ukunta. Muddada ukunta wanaagsani waxay socotaa labo ilaa saddex sano. Muddada ugu badan ee ukunta ugu badani waxay socotaa ilaa 80 toddobaad, ka dibna waxaa lagula talinayaa inay digaagga u oggolaadaan hilibka iyo beddelaan madaxyada yar yar.
Akhri sidoo kale digaagga daba-galka ee cadaanka ah.
Digaagga dal-is-dhaafka ah ayaa hoos u dhigaya daryeelka oo u dulqaadan kara xitaa qabow daran, isla markaana si dhaqso ah ula qabsata xaalad kasta oo cimilada ah. Hase yeeshee, waxaa jira xaalad muhiim ah oo ay ku hayaan dayactirka - meel ku filan: oo leh degaan yar oo loogu talagalay nolosha, waxay bilaabaan inay waayaan waxsoosaar. Under xaaladaha sii kordhaya wanaagsan iyo u hoggaansamida buuxda ee taranka, miro dhalashada ee noqon doonaa 98-99%.
Sifooyinka ugu muhiimsan ee digaagga ayaa jabay brown waxaa laga arki karaa jadwalka hoose.
Midabka qalinka Bunni ah
Cufanaanta tufaaxa Cufan
Isku dar Caleenta cas
Torso Xooggan xoog leh laabta ballaaran
Beak Darbi, jajab jaale ah, oo dhererkiisu yar yahay
Miisaanka 1.7-2.2 kg
Wax soo saarka ukunta 310-320 pcs
Miisaanka 1 ukun 60-72
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay baadhitaanada DNA-da ay sameeyeen saynisyahannada, digaagga ayaa ah qaraabada ugu dhow ee tyrannosaurs. Kuwani waa weyn (miisaanka qiyaastii ilaa 9,5 taajirood) qoob-ka-hor-taagga taagta daran ayaa ku dhintay malaayiin sano ka hor sababtoo ah mashaqo dabiiciga ah.
Cawska Kuchinskaya ee sannadguur ahaan waxa loola jeedaa hilibka iyo jihada ukunta. Shimbirahaasi waa kuwo aan qabyo ahayn oo daryeel ah, waxaana lagu gartaa adkeysi sare, waxaa laga yaabaa in lagu hayo xaalado kala duwan. Digaagga si dhakhso ah ula qabsadaan xaaladaha jawiga cimilada, waxay u adkeeyeen isbeddellada hidda, sida socodka hawada cusub. Waxa lagu gartaa koritaanka degdegga ah iyo miisaanka korodhka - ilaa 2.5 bilood miisaankoodu yahay 1.5 kg. Caanahan waxaa lagu kala saaraa ma aha oo kaliya wax soo saarka ukunta, laakiin sidoo kale hilib tayo wanaagsan leh. In qaangaarka, digaagga gaadho miisaan ah 2.7-3 kg, iyo roosters wax yar ka badan - 3.4-4 kg. Hilibka digaaga waxaa ku jira qiyaastii 25.3% borotiinka oo leh bandhig wanaagsan. Qaadidda ukumaha waxay si ku meel gaar ah u joojin kartaa ukumaynta inta lagu jiro muddada molting.
Eggshell waa miro-casaan si loo midabeeyo midabka. Waa hagaag caan ah nasizhivaniya. Dhammaan jinsiga wuxuu gaaraa da'da 180 maalmood. Xiniinyuhu waxay leeyihiin bacriminta 95%, iyo suurtagalnimada digaagga ay dhacaan waa qiyaastii 77-87%. Awoodda dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 98.7%, iyo dadka waaweyn - qiyaastii 95%.
Shimbirahaasi waa kuwo saaxiibtinimo leh oo isku dheeli tiran Si loo hubiyo in ukumo wanaagsan la dhigo 13-15 digaag, hal caado ayaa ku filan. Heerkani wuxuu ku lug leeyahay saddex nooc oo midabeyn midab leh:
oo leh laba xayiraad;
iyada oo joogitaanka wejiga;
Digaagga waxay leeyihiin dhismo xoog leh, taas oo ah caanaha hilibka. Tilmaamyada ugu muhiimsan ee digaagga digaagga ee Kuchi waxaa laga arki karaa jadwalka hoose.
Midabka qalinka Midab khafiif ah, brown dahab ah, ka yar dhuxusha iftiinka
Cufanaanta tufaaxa Xoog, gaar ahaan qoorta
Torso Si tartiib ah ayey u foorarsatay laabta
Beak Caato ah caleemo huruud ah
Miisaanka 2.7-3 kg
Wax soo saarka ukunta 180-240 pcs
Miisaanka 1 ukun 58-60
Ogow inta uu le'eg yahay ukumaha, sababta aad u hesho labo ukun suuf ah, ukum leh caleenta cagaaran, dhiig; sababta digaagga ukunta jilicsan, qaado ukumo yar, ha si fiican u qaadin.
Digaagga Haysex waxaa lagu kala saaraa wax soo saarka sare iyo daryeelka aan qabin, taas oo ay sababtay caan ka mid ah jilayaasha waxayna noqdeen kuwo baahsan dunida oo dhan.
Ugu horreyntii, waxaa la sameeyay dhirta whitesex white. Hore wuxuu lahaa miisaan wanaagsan iyo jahwareer. Muddo ka dib, curiyayaasha ayaa helay aragti kale - brown highsex. Digaagga Kuwani waxaa lagu gartaa caabiga cudurro badan. Iyada oo xuduudaheeda, Hisex White waxay la mid tahay digaagaha lugaha. Waxay leeyihiin dhismo fiican, xajmiga cad ee cidhifyada meelo ka mid ah waxay leeyihiin dhar qafiif ah. On madaxa yar yahay waxaa jira shanlo ah caleen-qaabeeya. Hisex Brown waxaa lagu kala saaraa miisaankiisa weyn iyo midab madow oo leh dahab dahab ah. Dhibco cagaar ah ayaa lagu arkay dhirta baalasha. Dagaallada digaagga Haysex oo si fiican u duuban oo lagu gartey waxqabadyo muhiim ah. Digaagga Kuwani waa mid caqli leh oo si wanaagsan ula soco digaagga kale. Intaa waxaa dheer, Hisex Brown wuxuu leeyahay dabeecad u fiican saaxiibtinimo cad, sidoo kale waa wax soo saar badan. Wakiilo ka socda noocaani waa kuwo firfircoon, waxayna u baahan yihiin meel wanaagsan oo loogu noolaado.
Baro wax badan oo ku saabsan content of Highsex Brown iyo Highsex White.
Digaagga waxay gaaraan qaangaadhka galmada qiyaastii 5 bilood. Waa in la ogaadaa in indices-ka soo saarista ukumaha aan hoos u dhicin saddex sano. Sidaa daraadeed, beddelka la qorsheeyay ee madaxyada waxaa la sameeyaa waxoogaa yar marka la barbardhigo naasaha kale. Shimbirkan waxaa lagu hayaa wax soosaarka ukunta sare iyo kan caadiga ah. Hilibku ma laha dhadhan wanaagsan oo u baahan daaweyn kuleyl dheer. Ma jiraan wax dareen ah, laakiin looma baahna, sababtoo ah mawduucyada sare ayaa ka gudbaya.
Waa muhiim! Marka digaagga digaaga ee Himex, waa in la ogaadaa in qolofta ay ukuntoodu ay xoog badan tahay, iyo digaagga mar walba ma dabooli karaan. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in aan la seegin waqtigan iyo si ay u caawiso xakamaynta qolofka.
Awoodda dhalashada ayaa ka badan 95%.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee digaagga laxiriirta ayaa lagu soo bandhigay jadwalka hoose.
Midabka qalinka White Brown leh sheen dahab ah
Cufanaanta tufaaxa Xoog iyo hoos u dhac Xoog iyo hoos u dhac
Isku dar Large, oo casaan ah Large, oo casaan ah
Madaxa Celcelis ahaan Celcelis ahaan
Torso Saamaynta Saamaynta
Beak Dhexdhexaad, huruud ah Dhexdhexaad, huruud ah
Miisaanka 1.8 kg 2.5 kg
Wax soo saarka ukunta 300 gogo ' 360 pcs
Miisaanka 1 ukun 63-65 g 70-75
Ka hor intaan la isticmaalin, waxaa muhiim ah in la hubiyo ukunta loogu talagalay casriyeynta, tusaale ahaan, iyaga ku biyo ku daa.
Digaagga digaagga ayaa lagu qiimeeyaa daryeelka aan qabyada lahayn iyo wax soo saarka wanaagsan. Iskutallaabtani waxaa lagu caleemo saaray Jarmalka adoo taraya sababtoo ah isgoyska iskutallaabta ah ee udhaxeeya Brown iyo Rhode Island. Dalka Ruushka, waxaa la helay waxyaabo hoosaadyo ah oo awood u leh in ay soo saaraan ukun xilliga qaboobaha.
Layers of rhodonite ma dalbanayaan marka koray oo ay leeyihiin dabeecad deggan, waxay u dulqaadan qabow aad u wanaagsan. Waxaa si habboon loogu hayaa qaybta gaarka loo leeyahay. Waxaa jira saddex nooc. Waxaa intaa dheer, iskutallaabta ugu horeysay ee la soo saaray ayaa leh wax soo saarkoodu hooseeyo marka loo eego kuwa kale - ka dib 1.5 sano ka dib wax soo saarka ukumaha ayaa hoos u dhacaya. Laakiin awoodda ay ukumaha ukumaha ee laba nooc oo kale ah kuma xirna da'da guurka.
Miisaanka nool ee qofka ragga ah waa qiyaastii 3 kg. Qodobbada jinsiga ee ku jira lakabka bilawga hore ayaa bilaabmaa - afar bilood. Waxay leeyihiin wax soo saarka ugu sareeya da'da 1.5 sano, ka dibna hoos u dhaca soo saarida ukunta. Qaybta ukunta waxay leedahay midab khafiif ah.
Faa'iidada ugu weyn ee caansaankani waa mid si wanaagsan u dhigaya ukumaha, xitaa marka uu barafku dhaco, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah meelaha leh jawi ba'an. Dhalaanka ilma-haaddani wuxuu leeyahay adkeysi sare.
Ma taqaanaa? Si digaagga loogu talagalay in la yareeyo wax soo saarka ukunta ka dib bilawga ah 1.5 sano jir, diyaarinta gaarka ah ee loo yaqaan "tallaalka dibudhiska" waxaa loo maamulaa digaagga. Ka dib marka wax ka-qabashadaas ka dib, hen waxay si firfircoon u sii wadayaan 80 toddobaad oo kale.
Layers ma haysan dareenka ah ee isugeynta ukunta, sidaas darteed, naqshad waa lagama maarmaan u ah taranta this. Joogitaanka daacadku maaha daruuri, waxsoosaarka digaagga kuma xirna. Inkasta oo lagu taliyey in lagu ilaaliyo nidaamka guriga hen. Sifooyinka ugu muhiimsan ee digaagga rhodonite waxaa lagu soo bandhigay jadwalka hoose.
Midabka qalinka Brown iyo midab khafiif ah
Isku dar Maraq weyn oo caleemo casaan ah
Torso Dhexdhexaad leh laab laabta
Beak Gagaarka laydhku wuxuu u qaybsan yahay qaybta dhexe ee madow.
Wax soo saarka ukunta 300 gogo '
Miisaanka 1 ukun 60
Si aad u badbaadiso ukunta wakhti dheer, waxaad isticmaali kartaa habka laguugu keydiyo.
Nooc kale oo digaag ah oo leh soosaarka ukumaha sareeya waa khadka sare. Shimbirahaasi waa kuwo aad u saaxiibtinimo, firfircoon, waxayna ku noolaan karaan si nabad ah noocyada kale. Waxay u adkaystaan ​​cuduro badan oo faa'iido leh marka la eego dayactirka. Tani waa iskutallaab in lagu qasi karo qiyaasta warshadaha iyo si sahlan loo hirgeliyo beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay. Badeecadaha sare: Baraar, Silver Brown, Sonia, W-36 Cross waxaa soo saaray shirkad Maraykan ah "Hy-Line International". Qeybaha soo socda ayaa ah kuwa dillaacsan, kuwa dufanka dheeriga ah, bunka iyo dhirta yaryar - waxay ku kala duwanyihiin gaduudan casaan ah waxayna qaadaan ukunta madow, iyo W-36, W-77 iyo W-98 crosses leeyihiin baal cad, midabka cad. Digaagga ayaa miisaankoodu ka badan yahay 2.5 kg, oo qoortuna ma miisaankeedu ka badan yahay 3 kg.
Qaangaadhnimada waxay dhacdaa illaa 5 bilood. Awoodda taranka waa mid aad u sarreeysa - qiyaastii 96- 98%. Xagga sare ee caleenta cad oo sarre ah iyo midabkoodu sarreeyo way ka duwan yihiin marka loo eego waxqabadka.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee digaag-tayo sare leh ayaa laga arki karaa jadwalka hoose.
Midabka qalinka White Brown-reddish
Isku dar Casaan weyn Casaan weyn
Madaxa Yar Yar
Torso Nadaafad, qumman Nadaafad, qumman
Beak Jaale Jaale
Miisaanka 1.74 kg 2.25 kg
Wax soo saarka ukunta 247-350 gogo ' 241-339 gogo '
Miisaanka 1 ukun 60-65 g 60-65
Ruushka caddaanka ah
Digaagga jilicsan ee Ruushka ayaa caan u ah sababtoo ah sahlanaanta daryeelka, quudinta iyo waxsoosaarka sare. Caanaha ku jira su'aasha waxaa la dhigay bred by Ruushka iyadoo la soo gooyay Leghorn la leh digaagga deegaanka. Shimbirahaasi waxay yihiin kuwo aan qabyo ahayn oo daryeela, waxay u adkaystaan ​​cuduro badan waxayna si fiican u dulqaadanayaan xilliga qaboobaha leh dhaxan. Wixii soo saarka hilibka maaha mid ku haboon. Miisaanka lakabka waa inaan ka badnayn 2.5 kg.
Digaagga waxaa lagu gartaa waxoogaa jireed oo waaweyn iyo midab cad oo caddaan ah, taas oo ay ku heleen magaca labaad - "Snow White". Muuqaalka muuqaalku waa scallop ballaaran, istaagida tooska ah ee ragga, iyo yar yar, waxoogaa hoos u deldel dumarka. Digaagga ayaa qiyaasaya qaangaarka da'da shan bilood. Xayawaanku wuxuu leeyahay awood nololeed weyn - nolol beertu waa 96%. Waxay ka lumeen dareenkiisa si ay u qabtaan, sidaas darteed digaagga ayaa laga saaraa kuleylaha.
Markaad dalxiisaan digaag cad oo Ruush ah, waxaa haboon in la tixgeliyo inay si fiican u duuli karaan, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay baalashooda ku xoqaan si habboon oo ay u ilaaliyaan aviary leh shabakad sare. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee digaagga cad ee roodhida ah ee Ruushka ah ayaa laga arki karaa shaxda hoose.
Midabka qalinka Midab baraf cad
Cufanaanta tufaaxa Ku adkee jirka
Isku dar Midab casaan
Madaxa Cabbirka dhexdhexaadka ah
Torso Lafo xoog leh oo leh laab laabta
Miisaanka 1.8 kg
Wax soo saarka ukunta 200 gogo '
Miisaanka 1 ukun 55-65
Si digaagga loo qaato ukumaha, ma ahan lagama maarmaan in la yeesho cirrid: Dadka shisheeye ayaa loo baahan yahay bacrinta haddii ay digaagdoonka la qorsheynayo.
Digaagga Pushkin ayaa ku haboon beerista iyo dayactirka qaybta gaarka loo leeyahay. Shimbirkan waxaa lagu kala saaraa ma aha oo kaliya wax soo saarka ukumaha sare, laakiin sidoo kale hilibka dhadhan fiican leh. Intaa waxaa dheer, digaagga sida aan qabyo ahayn marka loo eego daryeelka iyo quudinta. Magaca caanaha waxaa sabab u ahaa magaalada Pushkin, halkaas oo ay ku beeri kicinta kuwan digaag la ciriiriyey.Aabayaashood waxay ahaayeen Leghorn iyo Australorps. Waxaa jira laba nooc oo noocyada kala duwan ah - mid ayaa laga helaa Sergiev Posad, kan kalena waxaa lagu soo riday Pushkin. Waa in la ogaadaa in cadadu ay ku adkaato raga, halka dumarku ay ku madadaashaan madow. Waxaa sidoo kale jira midab madow iyo caddaan ah oo cadaan ah.
Miisaanka lakabka ayaa wax yar ka weyn kan lakabka - 2.5-3 kg. Ragga waxaa badanaa loo oggol yahay hilibka leh midab cad iyo dhadhan fiican. Miisaanka carcass waa qiyaastii 1.8-2.5 kg horayba ugu jiray da'da shan bilood.
Shimbirahaasi waxay leeyihiin dabeecad saaxiibtinimo leh iyo si degan ula soco noocyada kale. Si aad u ilaaliso nidaamka digaaga digaaga, khubarada ayaa kugula talinaya in aad qaadato hal roodle oo ah 20 digaag. Laakiin haddii ay jiraan qulqulo badan, khilaafyada looma diidi doono. Qaangaadhka jinsiga ee Pushkin duurjoogta ayaa ku jira 4.5 ilaa 5 bilood. Ukumaha ugu horreeya waa qiyaastii 50 garaam oo hal mug leh, laakiin da'da, xajmiga ukunta ayaa noqda mid weyn. A dhibicda wanaagsan waa xaqiiqda ah in soo saarista ukunta sii wadaan sida muuqaalka of dhaxan. Ukunta ukunta waa kareem ama caddaan. Digaag digaag ah looma badin karo ilaa 3-4 sano, taas oo macnaheedu yahay in beddelidda xoolaha la sameeyo wax yar. Bacriminta ukumaha ayaa sarreeya - 90-95%, iyo xajmiga caruurtu waa 80%.
Marka la eego daryeelka, arintan waa mid aan qabyo ahayn oo daganna u wareegsan, laakiin waxaad mar walba u baahan tahay inaad daryeesho coop diiran habeenkii. Sifooyinka ugu muhiimsan ee digaagga cad ee Ruush ayaa laga arki karaa shaxda hoose.
Midabka qalinka Madow iyo caddaan
Cufanaanta tufaaxa Qalliinka, dhagan
Isku dar Casaan kulul
Madaxa Si tartiib tartiib ah ayey u socotaa
Torso Trapezoid ballaaran
Beak Si tartiib ah jaalaha, ballaaran
Miisaanka 1.8-2.4 kg
Wax soo saarka ukunta 260-270 gogo '
Miisaanka 1 ukun 90-100 g
Cunista ukunta cayriin, taxadar: sheyga ku jira qaabkiisa caanuhu wuxuu kicin karaa horumarinta cudur halis ah - salmonellosis.
Hadda wax soo saarka ukunta, noocyo farabadan oo kala duwan iyo jaangooyooyin digaag ah oo ah ukunta iyo ukunta-hilibka ukunta leh qiyaasta ukunta weyn, oo ay ku kala duwan yihiin fududaan iyo wax soo saar sare, ayaa la soo saaray. Bilawga dhalashada, digaagga badiyaa waxay qaadaan ukun yar yar, oo ugu dambeyntii noqoto mid weyn. Waa in sidoo kale la ogaadaa in dadweynaha digaagga waa in la cusbooneysiiyaa sanado yar, sida caadiga ah waxay leeyihiin wax soo saarka ukunta fiican 3-da sano ee ugu horeeya. Waad ku cusbooneysiin kartaa xoolahaaga, haddii aad haysato nooc jilicsan.